ग्रीक स्वतन्त्रता दिवस - देश को सबै भन्दा महत्वपूर्ण छुट्टी
यस युनानी लागि, वर्ष को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छुट्टी ग्रीस को स्वतन्त्रता दिवस हो। यो मार्च को अन्त मा मनाइन्छ, र यो 25 दिन छ। सबैभन्दा जस्तै भएको बाल्कन देशहरूमा प्रायद्वीप, ग्रीस तुर्क साम्राज्य को जुवा चार भन्दा बढी शताब्दीयौंदेखि थियो। 1821 मा मानिसहरू सबै शक्तिहरू mobilized र राष्ट्रिय मुक्ति संघर्ष जसको नतिजा स्वतन्त्रता को घोषणामा थियो, को बाटो निस्कँदा। यो नै वर्ष को मार्च 25 मा भयो। को विद्रोह 1771-1781 वर्ष को परिणाम यसको विपरीत, युनानी अन्तमा टर्की आक्रमणकारिहरुमा पराजित गर्न सक्षम थिए।
राष्ट्रिय संघर्ष को शुरुवात र ग्रीस को स्वतन्त्रता को लामो-प्रतीक्षा दिन
रूपमा अनौठो लाग्न सक्छ, तर मुक्ति संघर्ष को विचार पहिलो युक्रेन बस्ने भएको युनानी बीचमा देखा परे। त्यहाँ विशेष गरी पोर्ट शहर (ओडेसा, Kherson, Taganrog, आदि) को 18 औं शताब्दीको दोस्रो आधा मा, एक ठूलो ग्रीक समुदाय गठन। यो टर्की जुवा देखि भागे जसले परिवार शामिल थिए। 1814 मा, राष्ट्रिय मुक्ति संगठन "मैत्री समाज" आप्रवासी बीच गठन भएको थियो। यसको नेताहरूले ग्रीस को सबै प्रमुख शहर गर्न प्रतिनिधिहरू पठाउन थिए। को masterminds बीच रूसी अधिकारीहरु थिए - युनानी मूल द्वारा - भाइहरूलाई अलेक्जेन्डर र DIMITRIOS Ypsilanti। तिनीहरूले रूसी सम्राट् को अदालत नजिक थिए। 1821 को पहिलो वसन्त महिनाको सुरुमा भाइहरूलाई मा माल्डोवा, Morea र अन्य बाल्कन देशहरूमा विद्रोह नेतृत्व। सशस्त्र विद्रोह - सबैभन्दा व्यापक-लिएर कार्य को लागि निर्धारित महिनाको अन्तिम दशकमा। चाँडै उहाँले नियुक्त गरियो र पहिलो दिन - 25 मार्च। फलस्वरूप, ग्रीक मान्छे शत्रु आक्रमणकारिहरुमा हटाउन सक्षम छन्। Revelries, ग्रीस मा चार शताब्दीदेखि टर्की सैनिकहरू देश छोड्ने बाध्य भए। आज, यो दिन रूपमा मनाइन्छ स्वतन्त्रता दिवस ग्रीस को। उहाँले एक मुक्त देश बाँचिरहेका अन्तिम 200 साल आधुनिक युनानी लागि शीर्ष बिदा, जो धन्यवाद बीच undisputed नेता छ। युनानी युरोप भर सबैभन्दा स्वतन्त्रता-मायालु मानिसहरूका हुन, र मृत्यु बस tantamount कसैको जुवा हुन जानिन्छ। ग्रीक जागृति को दिन - त्यो किन तिनीहरूले लागि आफ्नो स्वतन्त्रता र मार्च 21 मा मोल छ।
ग्रीस मा अर्थोडक्स बिदा
पहिले नै उल्लेख रूपमा, यो मसीही देशमा, संख्या मा सांसारिक साथ सार्वजनिक बिदा पनि चर्च समावेश छन्। डिसेम्बर 25 24 औं देखि - यो अर्थोडक्स ग्रीस मा, oddly पर्याप्त, क्रिसमस क्याथोलिक क्यालेन्डर मा मनाइन्छ। तर यहाँ जनवरी6मना इपिफ्यानी Name र येशूको बप्तिस्मा यर्दन नदी। यो एक सुन्दर अनुष्ठान छ। को liturgy पछि, पुजारी समुद्रको गहिराइमा मा पार फेंकता। भूमध्य सागर गोता सबै इच्छुक मानिसहरू को चिसो जनवरी पानी मा उनको निम्न। पार प्राप्त गर्न प्रबन्धन जो कोहीले यो छुट्टी को protagonist बन्नेछ। वास्तवमा, ग्रीस बिदा सधैं महान् मात्रा मा मनाइन्छ छन्। संगठित चाडहरूमा, समुद्र रक्सी र व्यवहार को विलाप टेबल खन्याइदिएकी। यो युनानी अन्य राष्ट्र कुनै पनि जस्तै, रमाइलो नृत्य गर्न, गाउन, र यति मा। डी त्यस्तो प्रेम पवित्र दिन Lent को शुरुवात, र तिनीहरूले ठूलो बाटो मा हो Annunciation रूपमा। यसलाई बुझ्ने इस्टर दिन गाइरहेका र आनन्द मान्छे (Lent को अन्त)। संन्यासी Constantine र हेलेन दिन - 21 मई छ - मण्डली ग्रीस को बिदा बीच त्यहाँ, सायद, मात्र यो देश मा उल्लेख गरेको छ कि छ। यो दिन ठूलो procession लागि उल्लेखनीय छ। सम्राट्लाई चमत्कारी ढंगमा मुस्लिम घेराबन्दीको देखि सुरक्षित थियो जब दिन - साथ Constantine को नाम पनि Theotokos (Agia Skepi) को अन्तर्विन्ती सम्बन्धित छ।
यी घटनाहरू प्रत्येक यसको आफ्नै विशेष संस्कार छ। यी Housewives को दिन विशेष व्यञ्जन पकाउन। यो उत्सव रोटी खाना पकाउने, विशेष महत्त्वपूर्ण छ एक सिक्का वा अरू केही लुकाउने छुट्टी आधारमा जो। साथै, युनानी को हल्ला कम्पनी मा बिदाको मनाउन मनपर्छ। बस्न, कुशल Housewives द्वारा तयार स्वादिष्ट भोजन खान, स्थानीय स्रोत पेय पिउन, कि बारे आकस्मिक कुराकानी राख्न - .. यो बारे गीतहरू गाउन, आदि सबै ग्रीक छुट्टी को culmination राष्ट्रिय नृत्य, विशेष गरी Sirtaki छन्। प्रत्येक अन्य गरेको काँध मा आफ्नो हात राख्दै, यस युनानी आफ्नो पौराणिक नृत्य गर्न थाल्छन्।
राष्ट्रिय बिदा ग्रीस
संसारको सबैभन्दा देशहरूमा संग, सबै भन्दा प्रिय छुट्टी अझै पनि एक नयाँ वर्ष छ। उहाँले सबै युरोपेली देशहरूमा जस्तै, जनवरी 1 को रात मनाइन्छ। ग्रीस मा मई दिवस रंग र श्रम को दिन छ। मई को पहिलो दिन मा युनानी को बहुमत को लागि एक बालिका र महिला माला बुनाई छन् जहाँ प्रकृति, मा पदयात्रा पर्छ छ wildflowers, त्यसपछि तिनीहरूले अगस्ट 29 (सेन्ट जन दिवस) सम्म भण्डारण छन्, र त्यसपछि खम्बा मा जलाए।
र महिला भूल छैन!
ग्रीक बाल्कन को कमजोर सेक्स समर्पित एक छुट्टी छ - Ginaykratiya। यो पनि 8th मा उल्लेख गरेको छ, तर मार्च छैन, र जनवरी। यो दिन मा, महिला चाडहरूमा छन्। पति सबै घरेलू घरधन्दा हेरविचार र यसको आधा, आफूलाई अप नेतृत्व र एक क्याफे वा रेस्टुरेन्ट जाने जो दिन तिनीहरूलाई जारी।
ग्रीस को राष्ट्रिय बिदा पनि हो: 19 मई - अगस्ट 28, र नोभेम्बर 17 - - यो पलिटेक्निक को भोजमा नरसंहार, Ohi दिन सिकार को स्मृति दिवस। ठीक छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व, पहिले नै उल्लेख - ग्रीस को स्वतन्त्रता दिवस हो। निस्सन्देह, यो यो देशमा मनाइन्छ छन् चाडहरूमा पूर्ण सूची हो। तर, हामी पहिले नै नाम छ कि व्यक्तिहरूलाई, सबै भन्दा व्यापक छन्। ।
मुख्य ग्रीक छुट्टी
निस्सन्देह, तपाईं के छलफल गरिनेछ, यो अंदाजा। निस्सन्देह, यो ग्रीक स्वतन्त्रता दिवस। उहाँले सबै Bells घन्टी, एक बिहान liturgy आयोजित बिहान देश को चर्च मा यो दिन, चर्च हौं गर्दैन, कि र त्यसैले तथ्यलाई बावजुद। डी त्यसपछि प्रमुख शहर को सडकमा एक सैन्य परेड, कार्यकर्ता को शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हो। स्मारकका लागि विद्रोह तोकिएको फूल र माला को दिन मा मृत्यु भयो।
Dionysus को छडी चिरहरिलता र दाखको बोट पात संग wreathed (फोटो)
छोराछोरीलाई लागि युक्रेनी मान्छे को रोचक परम्परा: सुविधाहरू र इतिहास को एक सूची
समाज को मुख्य क्षेत्रहरू
विश्व को आभूषण: शैलीहरू, रूपांकनों, ढाँचाहरू
मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग मा संग्रहालय पनडुब्बी
सूचना समाज - यो हाम्रो भविष्य छ
आधारभूत सामग्री cockatiel, को चरा लागि पिंजरे आकार
Antoine Griezmann - मजबूत समकालीन खेलाडीहरू एक
गर्मी ज्याकेट: उपकरण र सल्लाह प्रदर्शन
रवान्डा राजधानी किगाली, यसको विवरण, इतिहास र आकर्षण
2015 कुन बकरी को वर्ष हो? नीलो काठको बकरीको वर्ष: विशेषता
हितोपदेश बारेमा आमा - सबैभन्दा महंगा को मान्छे को बुद्धि
रेलवे स्टेशन Anapa: ठेगाना, टिकट, तालिका
प्रजनन - छ कि जीव छ? परिभाषा र प्रकृति मा प्रजनन उदाहरणहरू
ग्रेगरी चुम्बन (ग्रेगरी चुम्बन): जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन